Rooble oo u ambabaxay dalka Isutagga Imaaraadka Carabta. – XAMAR POST
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta ah M Maxamed Xuseen Rooble iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Isutagga Imaaraadka Carabta, isagoo kulammo lagu xoojinayo xiriirka iyo iskaashiga labada dal la yeelan doona madaxda sare ee dalkaas.
Waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ka sii sagootiyay Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan Xukuumadiisa.
Socdaalka Ra’iisul Wasaare Rooble ee Imaaraadka ayaa noqonaya kii u horreeyay oo Mas’uul heerkiisu sareeyo oo dowladda Federaalka Soomaaliya ka socda ku tago dalkaas, tan iyo sanadkii 2018, xilligaasoo Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyr safar ku tagay, iyadoo dhowr todobaad kaddibna uu xiriirka labada dal uu xumaaday, dhacdadii Ciidamada Amniga kula wareegeen lacag mallaayin dollar ah oo u socotay Safaaradda Imaaraadka, is hor-taagna lagu sameeyay diyaarad Diblomaasiyiin Imaaraad la socdeen.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa horraantii bishan Imaaraadka Carabta ka raalli geliyay dhacdadaas, isagoo balanqaaday in dib loogu celin doono lacagta lagala wareegay April sanadkii 2018. Tallaabadaas ayaa irdaha u furtay inuu dib caadi ku soo laabto xiriirkii labada dal.
Hay’adaha Amaanka Dowladda oo kanacsatada suuqa Bakaaraha ku amaray in ay dib u furaan ganacsiyadooda.